Ngwongwo AC kacha mma YG (YGP) maka tebụl ala na-emepụta ihe na ụlọ ọrụ | Okwu
YG (YGP) usoro AC moto maka ala table
Ngalaba Ngwaahịa Ngwaahịa Nkọwapụta YG usoro nke atọ AC na-arụ ọrụ igwe maka igwe na-agba okpokoro YG usoro usoro ụzọ atọ maka tebụl ala bụ ọgbọ ọhụrụ dabere na usoro JG2. Omume ya zuru oke dịka ụdị ngwaahịa a na-ere n'ụwa niile. Ha nwere atụmatụ dịka ndị a: Ugwu arịgo nke usoro YG usoro motoro na-agbaso ọkọlọtọ IEC. Ogo nchebe maka ogige bụ IP54. Ofdị obi jụrụ bụ IC410. YG usoro Motors nwere ike ịbụ classifie ...
YG usoro usoro AC nke atọ nke AC maka tebụl ala
YG usoro atọ-adọ Motors maka ala table bụ ọgbọ ọhụrụ dabeere na JG2 usoro Motors. Omume ya zuru oke dịka ụdị ngwaahịa a na-ere n'ụwa niile. Ha nwere atụmatụ dịka ndị a:
Ndidọk udọk moto YG nsonso usoro ekekem ye idaha IEC. Ogo nchebe maka ogige bụ IP54. Ofdị obi jụrụ bụ IC410.
YG usoro Motors nwere ike nkewa dị ka ụdị YGa na ụdị YGb ọgwụgwụ ojiji. YGa Motors na-egosipụta ọnụọgụ dị elu, obere igbochi ugbu a, nnukwu ike na-agbanwe agbanwe, akụrụngwa dị nro, wdg ma nwee ike ịmalite ịmalite, ịmegharị na imegharị ọrụ. YGa moto tumadi iji amaba mmiri nke na-arụ ọrụ tebụl na ụlọ ọrụ na-ahụ maka igwe na ọrụ ọrụ yiri ya. YGb Motors atụmatụ elu ike, elu arụmọrụ, obosara kemeghi ọsọ nso, ike n'ibu e ji mara, wdg na Motors na-nwoke iji rive ala nke erute tebụl na metallurgical ụlọ ọrụ na yiri na-arụ ọrụ na ọnọdụ.
YGa moto bụ mkpuchi mkpuchi H, yana ụdị ọrụ a na-ahọpụta bụ S5, nke ahọrọ dị ka igbochi torque na ike na-agbanwe agbanwe mgbe niile na usoro ịlụ ọgụ. FC na-anọchite anya ọrụ ọrụ, FC bụ 15%, 25%, 40% ma ọ bụ 60%. Emepụtara ike nke YGa motọ na tebụl ụbọchị teknụzụ n'okpuru ọnọdụ nke ọrụ na-aga n'ihu yana naanị maka ntụle.
YGb moto bụ ihe mkpuchi nke F na ụdị ọrụ akpọrọ bụ S1, nke ahọrọ n'okpuru ọnọdụ nke ike nke chi na-aga n'ihu.
YG usoro Motors nwere ike gbanwee site inverter. YGa motọ nwere ike gbanwee site na 20 ruo 80 Hz na YGb motọ nwere ike gbanwee site na 5 ruo 80 Hz biko kpọtụrụ ngalaba ọrụ aka anyị ma ọ bụrụ na ịchọrọ ụbọchị ọzọ nke dị iche na tebụl ụbọchị teknụzụ.
YGP usoro usoro AC nke atọ nke AC na-arụ ọrụ site na ntụgharị maka tebụl ala
YGP usoro Motors kwadoro site na inverter maka ala-table dabeere YG usoro Motors ịgbatị kemeghi ọsọ nso enlarge etiti size na ike nso. Ezubere ya iji tinye onye ntụgharị ka ọ na-anyagharị tebụl na ụlọ ọrụ na-ahụ maka igwe eji arụ ọrụ, ọtụtụ ọsọ ọsọ ọsọ, yabụ enwere ike iji motọ ahụ ọ bụghị naanị na tebụl ala na-aga n'ihu na-aga n'ihu, kamakwa na tebụl ala na-ebido, na-emegharị, na-agbanwegharị ọrụ. .
Ekebe nke usoro usoro YG sitere na H112 ruo H225. Mpempe akwụkwọ mmepụta ya sitere na 8 ruo 240 Nm na usoro mgbasa ozi ya sitere na 5 ruo 80 Hz. Ma nha nke igwe usoro YGP sitere na H112 rue H400, na ntaneti ya na-esi na 7 Nm rue 2400 Nm, na nkpalite ya sitere na 1 rue 100Hz. YGP usoro Motors nwere ike mbanye ala table na nnukwu torque na ala na-agba.
Gosiri voltaji: 380V, gosiri ugboro: 50Hz. Tụnye voltaji pụrụ iche na ugboro ole, dịka 380V, 15Hz, 660V, 20Hz, wdg na arịrịọ ndị ahịa.
Ogologo oge: 1 ka 100 Hz. Tornọgide na-agbapụta ume sitere na 1 ruo 50 Hz na ike mgbe niile sitere na 50 ruo 100 Hz. Ma ọ bụ gbanwee ugboro ole kụrụ na arịrịọ.
Typedị ọrụ: S1 ka S9. S1 na tebụl ụbọchị teknụzụ bụ naanị maka nrụtụ aka.
Mkpuchi mkpuchi bụ H. ogo nke nchekwa maka ogige bụ IP54, enwere ike ịme ya na IP55, IP56, na IP65. Ofdị obi jụrụ bụ IC 410 (oyi jụrụ oyi).
Ọnọdụ nke igbe ọnụ: igbe njedebe dị n'akụkụ aka ekpe nke motọ, nha sitere na H112 ruo H225 elele site na njedebe ịkwọ ụgbọala, ọ dịkwa n'elu motọ ahụ, nke nha sitere na H250 ruo H400 elele anya na-abụghị osisi. ọgwụgwụ.
Nke gara aga: Y YE2 YE3 usoro ulo oru ato uzo AC ntinye moto
Osote: YP (YPG) usoro AC Motors chụpụrụ site inverter
YZ (YZP) usoro AC moto maka metallurgy na kreenu
YP (YPG) usoro AC Motors chụpụrụ site inverter
Y YE2 YE3 usoro ulo oru atọ adọ AC indu ...
Nepa NEPM NEPX inch usoro ulo oru elu effi ...